Dolly Parton Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Singers Dolly Parton Nyaya Yekuchecheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Dolly Parton Nyaya Yekuchecheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeMuimbi Wekare Chikoro Muimbi anonzi "Iron Bhururu“. Yedu Dolly Parton Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, hupenyu hwehupenyu, hwechokwadi hwemhuri, mararamiro uye nezvimwe zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weanobudirira kwazvo mukadzi nyika-mimhanzi muimbi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaDolly Parton's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Dolly Parton Upenyu hwepakutanga uye Imhuri Yepashure:
Dolly Rebecca Parton akazvarwa musi wa19 Ndira 1946 kuna amai vake, Avie Lee Caroline, uye baba vake, Robert Lee Parton Sr. asingaverengeki sharecropper mukamuri rimwe-kamuri pamahombekombe eRwizi rwePegeon Rwizi muPittman Center, Tennessee. Iye ari wechina pavana gumi nevaviri vanozvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki, Avie Lee Caroline naRobert Lee Parton Sr.
Nyika yeAmerican yedzinza chena akaberekerwa mumhuri yemhuri dzakaderera dzinobva kumhuri dzinosanganisira chiRungu, chiScotland, chiIrish, chiGerman uye chiWelsh. Paakanga achiri mudiki, mhuri yake yakatamira kupurazi riri padhuze neLocust Ridge kwaakakurira pamwe nevanin'ina vake vanonzi; Stella, Willadeene, Rachel Dennison, Randy, Floyd, Larry Gerald (akafa nguva pfupi achangozvarwa), Cassie Nan, Freida Estelle, Coy Denver, David Wilburn, naRobert Lee Parton.
Kukura kwavo mune imwe imba yekubatira yekamuri imwechete kuRustust Ridge nzvimbo inowanzoitwa Pentekosti, Parton aigara achienda kuChechi yaMwari (Cleveland Tennessee) iyo yaive yakafundirwa nasekuru vake, Jake Robert Owens. Akadzidza kuimba nekuenda kuchechi masevhisi uye nezvimwe zviitiko zvechechi.
Dolly Parton Dzidzo Uye nebasa Kuvaka:
Parakazosvika Parton aine makore matanhatu, akaita zvekutanga kuchechi yake, uye pazera ramakore manomwe, akatanga kutamba gitare repamba. Nekuda kwekushingairira kwake uye kuda mimhanzi, babamunini vake vakamupa gitare chairo gore rimwe chete mushure mekunge atanga kuridza gitare rake repamba.
Dolly Parton aive nedzidzo yepamutemo uye haana kutakurwa nerudo rwake rwemimhanzi sezvaaive anyoreswa chikoro kuita hunhu hwakanaka mune vaaidzidza. Akapinda Sevier County High School uye akapedza chikoro chesekondari muna1964.
Dolly Parton Upenyu hwekutanga Hupenyu:
Dolly Parton akatanga kuimba pawairesi enharaunda nematerevhizheni munharaunda yeEast Tennessee pazera nyowani uye pakazosvika makore gumi, akatanga basa rake reunyanzvi paakatanga kuoneka mu Iyo Cas Walker Show paWIVK Radio uye WBIR-TV muKnoxville, Tennessee.
Kuenderera kwake nesimba uye kuita mumhanzi kwakamupa mukana wekuonekwa kuGrand Ole Opry aine makore gumi nematatu. KuGreat Ole Opry, akasangana naJohnny Cash uyo akamukurudzira kuti atevedze nechivimbo zviroto zvake mumimhanzi sezvo yaive nzira huru yaanogona kukanganisa hupenyu hwevanhu.
VERENGA Mukadzi Gaga Nyaya Youcheche Plus Untold Biography Facts
Dolly Parton Road To Fame Nyaya:
Zano raJohnny rakasiya ratidziro kuna Dolly Parton uyo anga atamira kuNashville zuva rimwe mushure mekupedza chikoro chesekondari. KuNashville, akasaina chibvumirano chemimhanzi neMonument Records muna 1965 aine makore gumi nemapfumbamwe.
Parton akataura chishuwo chake chekunyora zvinhu zvemunyika asi akaodzwa mwoyo sezvo Monument Record yakaramba nhamo yake nepfungwa yekuti izwi rake rakasarudzika rakanga risingakodzere mhando. Aifanirwa kuenderera semubblegum pop muimbi uye akaburitsa tambo dzake singles dzakazove dzisina kubudirira senge rwiyo rwega "Anofara, Anofara Mwana Wekuzvarwa" rakarongedzwa harina kutyora Billboard Hot 100.
Dolly Parton Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Parton akakurumidza kukokwa kujoina musangano we Country Music Entertainer, Porter Wagoner muna 1967. Akatambira chikumbiro chake uye chakasainwa nechiratidzo chaPorter Wagoner, RCA gore rimwe chete. Rimwe gore mushure mekusaina kondirakiti chibvumirano neRCA, akaburitsa yake yekutanga ega ega “Nekuti Ndiri Mukadzi” yakanga ine mwero chati yakarova, inosvika nhamba 17 pane chati.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora iyi bio, Dolly Parton mutambi ane tarenda rakawanda akazvimisikidza muzvikamu zvakasiyana zvevaraidzo iyi. Ainge apa zvakanakisa mipiro uye mimhanzi mune rekodhi zvigadzirwa, kunyora nziyo, kuita pamwe nekuimba. Dolly Parton awana mapfumbamwe Grammy Awards semugumisiro wekuita kwake kusinganetsi uye kwepfungwa. Iye Nguo dzeVazhinji Makara akagamuchira Epiphany Prize yeanonyanya Kukwezva TV Chirongwa kubva kuVideoguide Awards muna 2016. Akasarudzirwazve mbiri dze2020 Grammy Awards panguva yekunyora. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Dolly Parton Hukama Hupenyu:
Nezve hupenyu hwehukama hwaDolly Parton, iye akaroora panguva yekunyora. Iko hakuna kuve nemagwaro epamutemo nezve ake ehupenyu hwekufambidzana pamwe nemukomana wake asati aroora Dolly Parton akasunga pfumo nekontrakita weasphalt, Carl Dean musi wa30 Chivabvu 1966. Dean aigara nguva dzose kubva pakatarisana nemukurumbira wemukadzi wake sezvo iri sarudzo yake ega yekuchengetedza zvakavanzika zvese nekudaro achigara kure nekutariswa neruzhinji.
Parton airemekedza chishuwo chemurume wake chekuvanzika chakagara naye kweanopfuura makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Akange ambotaura kuti akasangana nemurume wake pazuva rekutanga raakasvika kuNashville muna 53 achangopedza kudzidza. Vaviri ava vasati vava nevana kubva pakuroora kwavo vakapemberera gore ravo rechimakumi mashanu nemapfumbamwe remuchato mu1964.
Dolly Parton Hupenyu hwemhuri:
Dolly Parton anobva kumhuri yepasi-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
VERENGA Demi Lovato Nyaya Yenyaya yehuduku Plus Untold Biography Facts
Nezve baba vaDolly Parton:
Lt. Robert Lee Parton Sr. aive baba vaDolly Parton. Akazvarwa mu1921 uye akarasikirwa nehupenyu hwake kune ruoko rwunotonhora rwerufu mugore ra2000. Kunyangwe Robert Lee aive asingagoni kuverenga nekunyora, Dolly Parton akamutora semumwe wevarume vane hungwaru hwaakamboona. Rudo rwake kumhuri yake rwaive rwakanyanya zvekuti pese paanoenda kubasa, anotakura pamwe chete neyakagomara bhokisi remasikati iro vana vake ravanodaidza kuti “Mugomo wababa wekudya kwemanheru” maari anochengetedza chikamu chezvekudya kwake uye anozviunza kumba kuvana vake. Mutsa wake nerupo zvakava hwaro hwakaumba hupenyu hwaDolly paakange akura. Akaroora Avie Lee Caroline mu1939 uye aive nevana gumi nevaviri vakanaka naye.
Nezve amai vaDolly Parton:
Avie Lee Caroline aive amai vaDolly Parton. Iye akazvarwa pazuva re5th raGumiguru 1923 kuSouth Carolina USA. Aigara achinzi ndiye mutambi wekutanga waDolly uye aichengeta vana vake zvakanyanya kusvika paakarasikirwa nehupenyu kumaoko anotonhora erufu musi wa5 Zvita 2003. "Jasi reMavara Akawanda". Iyo inotaurira nyaya yemasokorere aakaita nekupa mwanasikana wake mudiki - Dolly - bhachi rechando kubva kuzvimedu zvidiki zvemucheka apo mhuri yake yaisakwanisa kutenga mabhachi matsva.
Nezve hama dzaDolly Parton:
Dolly Parton ane hama nhanhatu nehanzvadzi shanu. Vanun'una vake nehurongwa hwekuzvarwa vanotaurwa seizvi; Willadeene, David Wilburn, Coy Denver, Bobby Lee, Stella Mae, Cassie Nan, Randel Huston “Randy”, Larry Gerald, Estel Floyd naFreida Estelle (mapatya), naRachel Ann.
Achienda kumadzitateguru aDolly Parton uye mhuri yakatambanuka, sekuru vake amai vaive Rev. Jacob Robert Owens mwanakomana waJames Robert Owens naMary Malinda Messer apo ambuya vake amai vaive Rena A. Valentine mwanasikana waHenry Lloyd Valentine naMargaret Louisa Whitted. Vanasekuru vababa vaDolly vaive Williams Walter Parton naBessie Elizabeth Rayfield. Sekuru vaDolly vanonyanya kuzivikanwa Billy Owens anga ari kurudziro yake pamwe nemutsigiri wake mumujaho wemumhanzi basa. Dolly Parton akatumira mifananidzo yake aine vana babamunini vake pamwe nevazukuru vake pazviitiko zvakawanda apo ruzivo rudiki rwunozivikanwa nezvamainini vake.
Dolly Parton Hupenyu hwepamoyo:
Kure kure nekuedza kwaDolly Parton kwemimhanzi, tinokuunzira chokwadi nezvehunhu hwake kuitira kuti akubatsire kukupa mufananidzo uzere wake. Kutanga, Dolly Parton's persona musanganiswa weCapricorn uye akanyatsoratidza hunhu hwehunhu hwake hweZodiac.
Iye ane moyo murefu, ane hunyanzvi uye anehunhu hwakanyanya. Ane kutsunga kukuru mukuzadzisa zvinangwa zvake nezvinangwa muhupenyu. Dolly Parton ane zvido uye zvinokuvaraidza kunyanya mukubika uye akarima tsika yekutambira Granny Night yeKisimusi yega yega. Aipfeka mbatya dzaSanta nechipo vana vazhinji dzakasiyana siyana dzekudya kunonaka kwaakange azvigadzirira.
VERENGA Travis Scott Zvechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Dolly Parton Mararamiro Echokwadi:
Dolly Parton ane mari inofungidzirwa yemamiriyoni mazana mashanu emadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva kumimhanzi yake yekuedza uye kupedzisa kuita nemabhuroka sengeSollollar Production pamwe neDollywood Company apo kuongorora maitiro ake ekushandisa kunoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Muimbi wenyika- muimbi uyu anogara nemurume wake mumba maakatenga kunze kweNashville, kuTennessee, Brentwood. Imba yacho inofukidza pasi pemamita mazana matatu nemakumi matatu nemakumi mana ematanhatu uye yakatengwa muna3,324 iine huwandu hwemadhora mazana mana emadhora. Iye nemurume wake vakanga vatengesa imba yavaigara pakutanga vasati vatenga imba yavo nyowani inonaka muBrentwood. Mutyairi weNASCAR, Tyler Reddick akashongedza mota yake mukuremekedza Dolly nekushandura purogiramu yake yependi paChevrolet Camaro yake yekuratidza nyika-mimhanzi icon.
Dolly Parton Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Dolly Parton nyaya yehucheche uye biography, heano zvimwe zvishoma kana zvisingazivikanwe chokwadi nezveiyo iconic nyika mimhanzi mhare iyo ichakubatsira iwe kuti unzwisise mufananidzo wakazara weBio.
Dolly Parton akaberekerwa mumusha wechiKristu uye akabatirira pakutenda kwake kwechiKristu kunyangwe paakakura nemurume wake. Semwana mudiki, aishingairira uye akaramba achienda kukereke yake yekereke achidzidzira uye akaita kuti mimhanzi yake ibatanidzwe nekwaya yechechi yake.
Dolly Parton aive akaisa mamwe maratidziro akavanzika mumuviri wake. Ainge akapfeka kakawanda mapfekero ehembe refu kuvhara ma tattoo ake. Nekuda kwekuda kuziva kwevateveri vake nezvekuti sei akanyorera ma tattoo kunyatso nyatsoziva kuti aizozvivhara, Dolly akaburitsa pachena kuti akange aisa ma tattoos kuvhara mavanga kana zvinhu.
Kusvuta uye Kunwa tsika:
Dolly Parton haasati aonekwa achiputa fodya uye haana kumbobvira azivisa kune vekumapepa kana aine kufarira kuputa kana kunwa. Iye anozivikanwa kuve akachengeta hunhu apo anoratidza basa rekuva amai kune vazhinji vana vanouya munzira yake.
Mimhanzi yeCustomer Achibudirira:
Dolly Parton akaisa # 34 paVH1 Vakuru Vakadzi veDombo N Roll. Ainge anyorawo nziyo dzinopfuura mazana matatu, uye akatengesa zviyero zvemamiriyoni zana kubva pakutanga kwebasa rake rekuimba. Akasarudzwa kweanopfuura makumi mashanu nemashanu emitambo yeGrammy uye akahwina 3000 yeGrammy Awards panguva yekunyora iyi Bio.
Thanks for reading vedu Dolly Parton Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yevakadzi AMERICAN SINGERS
Ariana Grande Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Nyasha VanderWaal Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chris Brown Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kendrick Lamar Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi